Masina ny lalàna, sady marina no tsara
"Ka dia masina tokoa ny lalàna, ary masina ny didy sady marina no tsara" Rôm. 7:12.
Nametraka lalàna Andriamanitra, amin'ny maha-Mpanapaka fara-tampony eo amin'ny voary manontolo Azy. Notendreny ireo lalàna ireo mba hifehezany, tsy ny zava-manan'aina ihany, fa ny fihodin'ny zavaboary rehetra koa. Ny zavatra rehetra, na kely na lehibe, na manan'aina na tsia, dia voafehin'ny lalàna izay tsy azo atao tsinontsinona. Mihatra amin'ny zavatra rehetra izany lalàna izany satria tsy misy nohadinoin'Andriamanitra izay rehetra nohariany (...) Ny olombelona irery, izay fara-tampon'ny asam-pamoronana, no nomen'Andriamanitra feon'ny fieritreretana mba hahatakarany ny fitakiana masin'ny lalàn'Andriamanitra. Ary nomeny fo afaka ho tia izany amin'ny maha-masina sy marina ary tsara azy koa izy ireo. Fankatoavana avy hatrany sy tsy mihambahamba no takina amin'ny olona. — ST, 15 Aprily 1886
Izany lalàna izany dia mandrara ny ray aman-dreny tsy hampahory, ary mandrara ny zanaka tsy haneho tsy fankatoavana. Feno fitiavana sy famindrampo ary fahamarinana ny Tompo. Masina ny lalàny, marina sady tsara ary tsy maintsy ankatoavin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Misy fitsipika izay tokony hifehy ny fiainan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Mikoriana avy amin'ny fon'ilay fitiavana tsy misy fetra ireo fitsipika ireo. Ary ny haren'ny fitahian'Andriamanitra dia mitoetra amin'ireo ray aman-dreny izay mampihatra ny lalàn'Andriamanitra ao an-tokantranony, sy amin'ny zanaka izay mankatò izany lalàna izany. Aoka ho tsapan'ny tsirairay ny fiasan'ny famindrampo sy ny fahamarinana. "Mifamatotra ny famindrampo sy ny fahamarinana; mifamihina ny fahitsiana sy ny fiadanana". Handeha amin'ny lalan'ny Tompo ny tokantrano izay fehezin'izany fitsipika izany ka hahatanteraka izay mahitsy sy marina. — AH, 310,311 [...]
Koa satria "masina (...) sady marina no tsara" ny lalàn'Andriamanitra, sady firaketana an-tsoratra ny fahatanterahany, dia ho masina koa ny toetra izay voavolavola amin'ny alalan'ny fankatoavana izany lalàna izany. I Kristy no ohatra tanteraka ny amin'izany toetra izany. — GC,469.